ဖေဖေ့သားလေး အဖေတို့ဆီ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်လာခဲ့ပါ အဖေနှင့် အမေ စောင့်နေပါတယ် – Wun Yan
ဖေဖေ့သားလေး အဖေတို့ဆီ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်လာခဲ့ပါ အဖေနှင့် အမေ စောင့်နေပါတယ်
“ရင်နာတယ် အဖေ့သားလေးရေ ငါ့သားလေး မသွားချင်ပါဘူးလို့ ခဏခဏပြောနေတဲ့ကြားက အဖေတို့ခေါ်သွားမိခဲ့တာလေ ဒီလိုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကို အဖေသားလေး ကြိုများသိနေသလား သားလေးရယ်
သားရယ် အဖေတို့ကကောင်းစေချင်တဲ့မေတ္တာနဲ့ ဒီနေရာကိုခေါ်လာခဲ့မိတာပါ ငါ့သားရယ် ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်မလာခဲ့ပဲ မမျှော်လင့်ထားတာတွေဖြစ်လာခဲ့ရတယ်ငါ့သားရယ်၊
အဖေ့သားလေးလည်းပါတယ်လေ ခွဲစိတ်ဆရာမကြီးဆီသွားတွေ့တော့ သူကပြောတယ်လေကွာ သားရဲ့ရောဂါက အူလမ်းကြောင်း အာရုံကျောအားနည်းနေတာတဲ့ အဲဒီနေရာလေးကို စအိုကနေတစ်ဆင့် အသေးစား ခွဲစိတ်လိုက်ရင် ကောင်းသွားမှာပါ၊စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး ခွဲစိတ်ပြီး ဆေးရုံမှာနေရ ၅ ရက်ပေါ့ဆိုတော့ အဖေတို့လည်းဝမ်းသာပြီးပျော်သွားတာပေါ့၊ဆရာမကြီးကို ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ အဖေတို့လက်အုပ်လေးတောင်ချီခဲ့ကြသေးတယ်၊
ဒါနဲ့ပဲ သူတို့ချိန်းလိုက်တဲ့ရက်မှာ ငါ့သားလေးကိုအဖေတို့ပြန် ခေါ်လာခဲ့မိတာ, ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတနည်းပါးလွန်း
တော့ ကိုယ်တွေထက်တတ်ကျွမ်းတဲ့သူတွေကို ယုံခဲ့မိတာ, ငါ့သားလေး နားလည်ပေးပါကွာ။ ဆေးရုံမှာလည်း ခွဲရက်ကိုစောင့်ရင်း အရည်ပဲသောက်နေရတာ ၂လနီးပါးဆိုတော့ ငါ့သားလေးလည်းပိန်လာပြီပေါ့ အဖေစိတ်မကောင်းဘူး၊၊
အဲဒီလိုနေလာရင်း တစ်နေ့ သူတို့ငါ့သားလေးကို ဆေးမှားသွင်းလိုက်ကြတာ ကံကောင်းလို့အသက်ပြန်ရှင်လာ
ခဲ့ရတာ အဲဒီအချိန်ထဲက အဖေစိတ်ထဲမှာ ဒီဆေးရုံ ဒီဆရာဝန် ဆရာမတွေကို အဖေဘဝင်မကျခဲ့တာ၊ ဒီလိုဆေးမှားထားတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကိုတောင် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတစ်စုံတရာမပြုလုပ်ပဲပစ်ထားရက်တဲ့ အဲဒီဆေးရုံက ဆရာ,ဆရာမတွေရဲ့စိတ်ဓါတ်ကို အဖေအံ့သြလို့မဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတယ် မင်းအမေက ပြဿနာကြီးထွားမှာစိုးပြီးတားခဲ့လို့ အဖေဘာမှမပြောခဲ့တာပါ၊
အဖေနဲ့ရေချိုးပြီးတိုင်း ကစားကွင်းမှာစော့နေကျလေ အဲဒီတုန်းက video ,photo ဖိုင်တွေအခုထိအဖေ့ ဖုန်းထဲမှာ ရှိနေသေးတယ်၊၊ 12.7.19 သောကြာနေ့မှာ ငါ့သားလေးကို ခွဲခန်းထဲခေါ်သွားပြီး ခွဲစိတ်ကြတယ်၊ ၂နာရီပဲအသေးစားခွဲစိတ်ရမယ်ပြောပြီး ၄ နာရီကျော်လောက်ထိသူတို့ခွဲစိတ်ချိန်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်၊ ခွဲခန်းထဲဝင်ခါနီး ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ အဖေ့သားမျက်နှာလေးကို မျက်စိထဲကခုထိမထွက်ဘူးသားရယ်၊၊
ခွဲတဲ့နေ့က သောကြာနေ့ စနေ တနင်္ဂနွေ ၂ရက်လုံးက အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ဆိုတော့, အဲဒီခွဲစိတ်ပြီး၂ရက်လုံးမှာ လုံလောက်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိခဲ့ဘူးပေါ့ ငါ့သားရယ်၊ ကိုယ်ခွဲစိတ်ထားတဲ့လူနာကလေးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကို တစ်ချက်ကလေးတောင်ဂရုတစိုက်နဲ့လာမကြည့်တဲ့ ခွဲစိတ်ဆရာမရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်လွန်ကဲမှုဟာလဲ အံ့မခန်းပါပဲ၊
ဆီးပိုက်တပ်ထားပေမဲ့ အပြင်ကိုပမ်းထွက်နေလို့ ရှိတဲ့တာဝန်ကျဆရာမကိုသွားခေါ်တော့ လာကြည့်တယ် သူလုပ်လို့မရဘူး ဆရာမကြီးလာမှပြောပြတဲ့၊ အမလေး ငါ့သားရေ သူတို့ပြောစကားနဲ့ အထင်ကြီး ယုံကြည်ထားသမျှမှားပါပေါ့လား၊ မင်းအမေမှာလဲ တစ်ယောက်ထဲပြုစုရတာ ပင်ပန်းနဲ့ ၊ နှာခေါင်းပိုက်ပြုတ်ထွက်လို့သွားခေါ်တော့လည် ဆရာမအချို့က ရွံသလိုပုံတွေနဲ့ကြည့်ပြီး ပြန်ထွက်သွားတယ်လေ၊ ဆရာတစ်ယောက်လာလုပ်ပေးလို့ပေါ့၊ ခွဲပြီးကထဲကအဖျားကလည်းတက်လိုက်ထာနော် ပါးစပ်ကလည်းအန်လိုက် ဖင်ကလည်းထွက်လိုက် အဖျားကလည်းတက်လိုက်နဲ့ ခွဲထားတာကလည်းနာ ငါ့သားလေး အရမ်းခံစားနေမှာပဲလို့တွေးပြီး အဖေမျက်ရည်ကျခဲ့မိတယ်။
ဒီကြားထဲသွေးလာဖေါက်တဲ့ဆရာမ အနီမ ငါ့သားလေးကို လက်တွေကော ခြေထောက်တွေကော ပွနေအောင်နေရာအနှံ့အပ်နဲ့ထိုးဆွနေတာ ဘာသွေးမှမရဘူး အဖေပြောတော့မှထပြန်သွားတယ်၊ နောက်ဆရာမလေးကျတော့ ၂ချက်လောက်နဲ့ သွေးရတယ်၊ အသင်တွေနဲ့အတတ်စမ်းတွေလေ ငါ့သားလေးနာလို့အော်နေတာ မြင်ရတာအဖေရင်ထဲမခံစားနိုင်ဘူး သားရယ်၊၊
ကလေးတစ်ခုခုထူးခြားလို့ သွားခေါ်ရင်လဲ အအော် အငေါက်ကခံရသေးတယ်၊ ခွဲထားတာပဲ ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့လို့ သူတို့ဆရာမတွေပြောကြသေးတယ်။စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ပြာယာခတ်နေတဲ့ အမေတွေကို မစာနာတဲ့အပြင် ဆရာမတွေကအကဲပိုတယ်လို့ထင်ကြသေးတယ်လေ။
15.7.19 ရက်နေ့မှာ ပါရမီဆေးရုံကို သွေးသွားစစ်နေတုန်း မင်းအမေဆီကဖုန်းဝင်လာတယ်၊ ကလေးကစိုးရိမ်ရတယ် တဲ့ ကြားကြားချင်း ရင်ထဲမီးစနဲ့အထိုးခံရသလိုမျိုးခံစားလိုက်ရတယ်ငါ့သားရယ် အဖေဆေးရုံကိုပြန်လာတော့ ငါ့သားလေးက အထူးကြပ်မတ်ဆောင်,အရေးပေါ်အခန်းထဲရောက်နေပြီ၊ အဖေ ယူကျုံးမရဖြစ်ခဲ့ရတယ်၊ ခွဲစိတ်ဆောင်က တာဝန်မဲ့တဲ့ ခွဲစိတ်ဆရာမနဲ့ သူ၏လက်ထောက်များကတော့ အနေမပျက်အစားမပျက် သူတို့ခွဲစိတ်မှုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ ငြင်းကြသေးတယ်၊
အထူးကြပ်မတ်ဆောင်က ဆရာဝန် ဆရာမတွေရဲ့ မစင်ကိုတောင်စားဘို့မထိုက်တန်တဲ့ အဲဒီခွဲစိတ်ဆရာဝန်မက ကိုယ်တွေဒီလောက်ပူဆွေးနေတာတောင်ငွေစကားပြောသွားလိုက်သေးတယ်၊ အဖေ စိတ်ကိုထိန်းပြီး မနည်းသည်းခံလိုက်ရတယ်၊ သူကပြောသွားသေးတယ် ကလေးရဲ့ကံနဲ့ အဖေအမေတွေရဲ့ကံပဲပေါ့တဲ့လေ ဘယ်လောက်ရင်နာစရာ ခံပြင်းစရာကောင်းလဲဆိုတာ၊ ICU ကဆရာမတွေမှာတော့ သားလေးအသက်ကို ရတဲ့နည်းနဲ့ပြန်ယူဘို့ကြိုးစားနေချိန်မှာ စစ်ဆေးချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်နဲ့တူပါတယ်၊ အဲဒီတော့မှ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ခွဲစိတ်ဘို့ လာတောင်းဆိုတယ်လို့ သိခဲ့ရတယ်
အဖြေက သွေးဆိပ်တက်ထာတဲ့ ခေတ်မှီစက်ကိရိယာတွေနဲ့မျိုးစုံကု သွေးဆိုရင်လဲ ၅၀ လုံးလောက်သွင်းပြီး ကုခဲ့ကြ ငွေကြေးတွေအမြောက်အများအကုန်ကျခံကု ခဲ့ကြပေမယ်လို့25.7.19 ရက်နေ့ ညနေ၅ နာရီအချိန်မှာတော့ သားလေးဟာ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်။ သားလေးဆုံးသွားတော့ ရောဂါရှာဖွေဘို့အတွက် အလှူခံပါတယ်၊အားလုံးသဘောမတူတဲ့ကြားကနေ ငါ့သားလေး ဘာကြောင့်,ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဆုံးပါးသွားခဲ့ရတာလဲဆိုတာ အဖေသိချင်လို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာပါငါ့သား၊၊
အဖေထင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲလား ငါ့သားရယ် သူတို့ခွဲစိတ်မှုလုပ်စဉ်က သွေးကြောထိသွားရာကနေ သွေးယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပြီး အဲဒီသွေးကနေတဆင့် ပိုးဝင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အဆိပ်တွေပျံ့နောက်ဆုံး အတွင်းကလီစာတွေကိုထိပြီး ငါ့သားလေး လူနဲ့မလိုက်အောင် ဝေဒနာတွေခံစားရပြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ၊၊
ဆေးစစ်ချက်အဖြေပြောလို့အပြီးမှာ သူတို့ရဲ့ခွဲစိတ်မှုလွဲချော်မှုကြောင့်အခုလိုဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ် တဲ့ ငါ့သားရေ. အဒီစကားကို ခွဲစိတ်ဘို့လမ်းညွှန်တဲ့ ဆရာမနဲ့ ခွဲစိတ်ခဲ့တဲ့ သူရဲ့လက်ထောက်ဆရာမက ပြောတာမဟုတ်ဘဲ အခြားဆရာဝန်မကတဆင့်ပြောခဲ့တာပါ။ အထူးကြပ်မတ်ဆောင်မှာ အပူမီးတွေနဲ့သောကဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလဲ မျက်ကွယ်ပြု အားပေးစကား နှစ်သိမ့်စကားလေးတစ်ခွန်းတောင်ပြောဖေါ်မရတဲ့အပြင်၊ သားလေးဆုံးသွားချိန်မှာတောင် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုမရှိပဲ တောင်းပန်စကားကိုလူကြုံနဲ့အပြောခိုင်းခဲ့တဲ့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်မ ၂ ယောက်ရဲ့စိတ်ဓါတ်ကတော့ ငါ့သားရေ အဖေ ရင်နာရတယ် ငါ့သားရေ ခွဲစိတ်ပြီးတာနဲ့ပဲ ပြီးရောတဲ့လား? သေတာ ရှင်တာ သူတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလားလို့ မေးလိုက်ချင်တယ် ငါ့သားရေ
ပြီးခဲ့တာတွေ ပြီးခဲ့ပြီမို့ ဒီလောက်လေးပဲရင်ဖွင့်ပြခဲ့တာပါ တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတာတွေကတော့ ဒီထက်မကအဆပေါင်းများစွာပါ။
ဖေဖေ့သားလေး အဖေတို့ဆီနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ပါ။ အဖေနဲ့အမေ စောင့်နေပါတယ်။ မိသားစုနဲ့ထပ်တူခံစားရပါတယ်သားလေးရေ။ နောက်ဘဝဆိုတာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဝေဒနာဆိုမျိုးမခံစားရပါစေနဲ့။ ကောင်းတဲ့ဘုံမှာစံမြန်နိုင်ပါစေသားလေးရေ။ ဖြူ စင်​​စေတနာရဲ့ ချစ်​လှစွာ​သော သားဇွဲရဲ့ ​နောက်​ဆုံးခရီး ဘဝတစ်​ခု ပြီးပြန်​ပြီ​ပေါ့။ ​ကောင်းရာမွန်​ရာ ဘုံဘဝကို ​ရောက်​ရှိပါ​စေသား​ရေ။ ဘဝဆက်​တိုင်း သက်​ရှည်​ကျန်းမာတဲ့ဘဝကိုပဲ ပိုင်​ဆိုင်​နိုင်​ပါ​စေ။
သဂြိုလ်​ပြီးချိန်​ 11:30 AM( 26.7.2019)
အားလုံးက ဘယ်ဆေးရုံဘယ်နေရာလဲမေးနေကြတော့ သိတဲ့လူတွေလည်းရှိပြီးသားပါ။ ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံ ခွဲစိတ်ကုသဆောင် .အရာအားလုံးအဲဒီမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။ ရှေ့ကတင်ထားတဲ့ ပို့စ်တွေကိုမကြည့်ပဲ ဖွတယ်လို့ထင်နေတဲ့ သူတွေ သိရအောင်လို့ပါ။
Source : Moe Win
ဖဖေသေ့ားလေး အဖတေို့ဆီ နောကျတဈခေါကျ ပွနျလာခဲ့ပါ အဖနှေငျ့ အမေ စောငျ့နပေါတယျ
“ရငျနာတယျ အဖသေ့ားလေးရေ ငါ့သားလေး မသှားခငျြပါဘူးလို့ ခဏခဏပွောနတေဲ့ကွားက အဖတေို့ချေါသှားမိခဲ့တာလေ ဒီလိုတှဖွေဈလာလိမျ့မယျဆိုတာကို အဖသေားလေး ကွိုမြားသိနသေလား သားလေးရယျ
သားရယျ အဖတေို့ကကောငျးစခေငျြတဲ့မတ်ေတာနဲ့ ဒီနရောကိုချေါလာခဲ့မိတာပါ ငါ့သားရယျ ဒါပမေဲ့မြှျောလငျ့ထားသလိုဖွဈမလာခဲ့ပဲ မမြှျောလငျ့ထားတာတှဖွေဈလာခဲ့ရတယျငါ့သားရယျ၊
အဖသေ့ားလေးလညျးပါတယျလေ ခှဲစိတျဆရာမကွီးဆီသှားတှတေ့ော့ သူကပွောတယျလကှော သားရဲ့ရောဂါက အူလမျးကွောငျး အာရုံကြောအားနညျးနတောတဲ့ အဲဒီနရောလေးကို စအိုကနတေဈဆငျ့ အသေးစား ခှဲစိတျလိုကျရငျ ကောငျးသှားမှာပါ၊စိုးရိမျစရာမရှိပါဘူး ခှဲစိတျပွီး ဆေးရုံမှာနရေ ၅ ရကျပေါ့ဆိုတော့ အဖတေို့လညျးဝမျးသာပွီးပြျောသှားတာပေါ့၊ဆရာမကွီးကို ကြေးဇူးတငျလှနျးလို့ အဖတေို့လကျအုပျလေးတောငျခြီခဲ့ကွသေးတယျ၊
ဒါနဲ့ပဲ သူတို့ခြိနျးလိုကျတဲ့ရကျမှာ ငါ့သားလေးကိုအဖတေို့ပွနျ ချေါလာခဲ့မိတာ, ကနျြးမာရေး ဗဟုသုတနညျးပါးလှနျး
တော့ ကိုယျတှထေကျတတျကြှမျးတဲ့သူတှကေို ယုံခဲ့မိတာ, ငါ့သားလေး နားလညျပေးပါကှာ။ ဆေးရုံမှာလညျး ခှဲရကျကိုစောငျ့ရငျး အရညျပဲသောကျနရေတာ ၂လနီးပါးဆိုတော့ ငါ့သားလေးလညျးပိနျလာပွီပေါ့ အဖစေိတျမကောငျးဘူး၊၊
အဲဒီလိုနလောရငျး တဈနေ့ သူတို့ငါ့သားလေးကို ဆေးမှားသှငျးလိုကျကွတာ ကံကောငျးလို့အသကျပွနျရှငျလာ
ခဲ့ရတာ အဲဒီအခြိနျထဲက အဖစေိတျထဲမှာ ဒီဆေးရုံ ဒီဆရာဝနျ ဆရာမတှကေို အဖဘေဝငျမကခြဲ့တာ၊ ဒီလိုဆေးမှားထားတဲ့ကလေးတဈယောကျကိုတောငျ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုတဈစုံတရာမပွုလုပျပဲပဈထားရကျတဲ့ အဲဒီဆေးရုံက ဆရာ,ဆရာမတှရေဲ့စိတျဓါတျကို အဖအေံ့သွလို့မဆုံးဖွဈခဲ့ရတယျ မငျးအမကေ ပွဿနာကွီးထှားမှာစိုးပွီးတားခဲ့လို့ အဖဘောမှမပွောခဲ့တာပါ၊
အဖနေဲ့ရခြေိုးပွီးတိုငျး ကစားကှငျးမှာစော့နကေလြေ အဲဒီတုနျးက video ,photo ဖိုငျတှအေခုထိအဖေ့ ဖုနျးထဲမှာ ရှိနသေေးတယျ၊၊ 12.7.19 သောကွာနမှေ့ာ ငါ့သားလေးကို ခှဲခနျးထဲချေါသှားပွီး ခှဲစိတျကွတယျ၊ ၂နာရီပဲအသေးစားခှဲစိတျရမယျပွောပွီး ၄ နာရီကြျောလောကျထိသူတို့ခှဲစိတျခြိနျကွာမွငျ့ခဲ့တယျ၊ ခှဲခနျးထဲဝငျခါနီး ကွောကျရှံ့နတေဲ့ အဖသေ့ားမကျြနှာလေးကို မကျြစိထဲကခုထိမထှကျဘူးသားရယျ၊၊
ခှဲတဲ့နကေ့ သောကွာနေ့ စနေ တနင်ျဂနှေ ၂ရကျလုံးက အစိုးရရုံးပိတျရကျဆိုတော့, အဲဒီခှဲစိတျပွီး၂ရကျလုံးမှာ လုံလောကျတဲ့ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုမရရှိခဲ့ဘူးပေါ့ ငါ့သားရယျ၊ ကိုယျခှဲစိတျထားတဲ့လူနာကလေးတှရေဲ့ ကနျြးမာရေးအခွအေနတှေကေို တဈခကျြကလေးတောငျဂရုတစိုကျနဲ့လာမကွညျ့တဲ့ ခှဲစိတျဆရာမရဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယုံကွညျခကျြလှနျကဲမှုဟာလဲ အံ့မခနျးပါပဲ၊
ဆီးပိုကျတပျထားပမေဲ့ အပွငျကိုပမျးထှကျနလေို့ ရှိတဲ့တာဝနျကဆြရာမကိုသှားချေါတော့ လာကွညျ့တယျ သူလုပျလို့မရဘူး ဆရာမကွီးလာမှပွောပွတဲ့၊ အမလေး ငါ့သားရေ သူတို့ပွောစကားနဲ့ အထငျကွီး ယုံကွညျထားသမြှမှားပါပေါ့လား၊ မငျးအမမှောလဲ တဈယောကျထဲပွုစုရတာ ပငျပနျးနဲ့ ၊ နှာခေါငျးပိုကျပွုတျထှကျလို့သှားချေါတော့လညျ ဆရာမအခြို့က ရှံသလိုပုံတှနေဲ့ကွညျ့ပွီး ပွနျထှကျသှားတယျလေ၊ ဆရာတဈယောကျလာလုပျပေးလို့ပေါ့၊ ခှဲပွီးကထဲကအဖြားကလညျးတကျလိုကျထာနျော ပါးစပျကလညျးအနျလိုကျ ဖငျကလညျးထှကျလိုကျ အဖြားကလညျးတကျလိုကျနဲ့ ခှဲထားတာကလညျးနာ ငါ့သားလေး အရမျးခံစားနမှောပဲလို့တှေးပွီး အဖမေကျြရညျကခြဲ့မိတယျ။
ဒီကွားထဲသှေးလာဖေါကျတဲ့ဆရာမ အနီမ ငါ့သားလေးကို လကျတှကေော ခွထေောကျတှကေော ပှနအေောငျနရောအနှံ့အပျနဲ့ထိုးဆှနတော ဘာသှေးမှမရဘူး အဖပွေောတော့မှထပွနျသှားတယျ၊ နောကျဆရာမလေးကတြော့ ၂ခကျြလောကျနဲ့ သှေးရတယျ၊ အသငျတှနေဲ့အတတျစမျးတှလေေ ငါ့သားလေးနာလို့အျောနတော မွငျရတာအဖရေငျထဲမခံစားနိုငျဘူး သားရယျ၊၊
ကလေးတဈခုခုထူးခွားလို့ သှားချေါရငျလဲ အအျော အငေါကျကခံရသေးတယျ၊ ခှဲထားတာပဲ ဒီလောကျတော့ရှိမှာပေါ့လို့ သူတို့ဆရာမတှပွေောကွသေးတယျ။စိုးရိမျစိတျနဲ့ ပွာယာခတျနတေဲ့ အမတှေကေို မစာနာတဲ့အပွငျ ဆရာမတှကေအကဲပိုတယျလို့ထငျကွသေးတယျလေ။
15.7.19 ရကျနမှေ့ာ ပါရမီဆေးရုံကို သှေးသှားစဈနတေုနျး မငျးအမဆေီကဖုနျးဝငျလာတယျ၊ ကလေးကစိုးရိမျရတယျ တဲ့ ကွားကွားခငျြး ရငျထဲမီးစနဲ့အထိုးခံရသလိုမြိုးခံစားလိုကျရတယျငါ့သားရယျ အဖဆေေးရုံကိုပွနျလာတော့ ငါ့သားလေးက အထူးကွပျမတျဆောငျ,အရေးပျေါအခနျးထဲရောကျနပွေီ၊ အဖေ ယူကြုံးမရဖွဈခဲ့ရတယျ၊ ခှဲစိတျဆောငျက တာဝနျမဲ့တဲ့ ခှဲစိတျဆရာမနဲ့ သူ၏လကျထောကျမြားကတော့ အနမေပကျြအစားမပကျြ သူတို့ခှဲစိတျမှုကွောငျ့ဒီလိုဖွဈရတာမဟုတျပါဘူးလို့ ငွငျးကွသေးတယျ၊
အထူးကွပျမတျဆောငျက ဆရာဝနျ ဆရာမတှရေဲ့ မစငျကိုတောငျစားဘို့မထိုကျတနျတဲ့ အဲဒီခှဲစိတျဆရာဝနျမက ကိုယျတှဒေီလောကျပူဆှေးနတောတောငျငှစေကားပွောသှားလိုကျသေးတယျ၊ အဖေ စိတျကိုထိနျးပွီး မနညျးသညျးခံလိုကျရတယျ၊ သူကပွောသှားသေးတယျ ကလေးရဲ့ကံနဲ့ အဖအေမတှေရေဲ့ကံပဲပေါ့တဲ့လေ ဘယျလောကျရငျနာစရာ ခံပွငျးစရာကောငျးလဲဆိုတာ၊ ICU ကဆရာမတှမှောတော့ သားလေးအသကျကို ရတဲ့နညျးနဲ့ပွနျယူဘို့ကွိုးစားနခြေိနျမှာ စဈဆေးခကျြထှကျပျေါလာတယျနဲ့တူပါတယျ၊ အဲဒီတော့မှ နောကျတဈကွိမျပွနျခှဲစိတျဘို့ လာတောငျးဆိုတယျလို့ သိခဲ့ရတယျ
အဖွကေ သှေးဆိပျတကျထာတဲ့ ခတျေမှီစကျကိရိယာတှနေဲ့မြိုးစုံကု သှေးဆိုရငျလဲ ၅၀ လုံးလောကျသှငျးပွီး ကုခဲ့ကွ ငှကွေေးတှအေမွောကျအမြားအကုနျကခြံကု ခဲ့ကွပမေယျလို့25.7.19 ရကျနေ့ ညနေ၅ နာရီအခြိနျမှာတော့ သားလေးဟာ ဆုံးပါးသှားခဲ့ပါတယျ။ သားလေးဆုံးသှားတော့ ရောဂါရှာဖှဘေို့အတှကျ အလှူခံပါတယျ၊အားလုံးသဘောမတူတဲ့ကွားကနေ ငါ့သားလေး ဘာကွောငျ့,ဘယျလိုဖွဈပွီး ဆုံးပါးသှားခဲ့ရတာလဲဆိုတာ အဖသေိခငျြလို့ခှငျ့ပွုပေးခဲ့တာပါငါ့သား၊၊
အဖထေငျထားတဲ့အတိုငျးပါပဲလား ငါ့သားရယျ သူတို့ခှဲစိတျမှုလုပျစဉျက သှေးကွောထိသှားရာကနေ သှေးယိုစိမျ့မှုဖွဈပွီး အဲဒီသှေးကနတေဆငျ့ ပိုးဝငျပွီး ခန်ဓာကိုယျအနှံ့အဆိပျတှပြေံ့နောကျဆုံး အတှငျးကလီစာတှကေိုထိပွီး ငါ့သားလေး လူနဲ့မလိုကျအောငျ ဝဒေနာတှခေံစားရပွီးအသကျဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ၊၊
ဆေးစဈခကျြအဖွပွေောလို့အပွီးမှာ သူတို့ရဲ့ခှဲစိတျမှုလှဲခြျောမှုကွောငျ့အခုလိုဖွဈသှားခဲ့ရတဲ့အတှကျတောငျးပနျပါတယျ တဲ့ ငါ့သားရေ. အဒီစကားကို ခှဲစိတျဘို့လမျးညှနျတဲ့ ဆရာမနဲ့ ခှဲစိတျခဲ့တဲ့ သူရဲ့လကျထောကျဆရာမက ပွောတာမဟုတျဘဲ အခွားဆရာဝနျမကတဆငျ့ပွောခဲ့တာပါ။ အထူးကွပျမတျဆောငျမှာ အပူမီးတှနေဲ့သောကဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာလဲ မကျြကှယျပွု အားပေးစကား နှဈသိမျ့စကားလေးတဈခှနျးတောငျပွောဖျေါမရတဲ့အပွငျ၊ သားလေးဆုံးသှားခြိနျမှာတောငျ တာဝနျယူမှု တာဝနျခံမှုမရှိပဲ တောငျးပနျစကားကိုလူကွုံနဲ့အပွောခိုငျးခဲ့တဲ့ ခှဲစိတျဆရာဝနျမ ၂ ယောကျရဲ့စိတျဓါတျကတော့ ငါ့သားရေ အဖေ ရငျနာရတယျ ငါ့သားရေ ခှဲစိတျပွီးတာနဲ့ပဲ ပွီးရောတဲ့လား? သတော ရှငျတာ သူတို့နဲ့မဆိုငျတော့ဘူးလားလို့ မေးလိုကျခငျြတယျ ငါ့သားရေ
ပွီးခဲ့တာတှေ ပွီးခဲ့ပွီမို့ ဒီလောကျလေးပဲရငျဖှငျ့ပွခဲ့တာပါ တှကွေုံ့ခံစားခဲ့ရတာတှကေတော့ ဒီထကျမကအဆပေါငျးမြားစှာပါ။
ဖဖေသေ့ားလေး အဖတေို့ဆီနောကျတဈခေါကျပွနျလာခဲ့ပါ။ အဖနေဲ့အမေ စောငျ့နပေါတယျ။ မိသားစုနဲ့ထပျတူခံစားရပါတယျသားလေးရေ။ နောကျဘဝဆိုတာရှိခဲ့မယျဆိုရငျဒီလိုဝဒေနာဆိုမြိုးမခံစားရပါစနေဲ့။ ကောငျးတဲ့ဘုံမှာစံမွနျနိုငျပါစသေားလေးရေ။ ဖွူ စငျစတေနာရဲ့ ခဈြလှစှာသော သားဇှဲရဲ့ နောကျဆုံးခရီး ဘဝတဈခု ပွီးပွနျပွီပေါ့။ ကောငျးရာမှနျရာ ဘုံဘဝကို ရောကျရှိပါစသေားရေ။ ဘဝဆကျတိုငျး သကျရှညျကနျြးမာတဲ့ဘဝကိုပဲ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစေ။
သဂွိုလျပွီးခြိနျ 11:30 AM( 26.7.2019)
အားလုံးက ဘယျဆေးရုံဘယျနရောလဲမေးနကွေတော့ သိတဲ့လူတှလေညျးရှိပွီးသားပါ။ ရနျကငျးကလေးဆေးရုံ ခှဲစိတျကုသဆောငျ .အရာအားလုံးအဲဒီမှာဖွဈပကျြခဲ့တာပါ။ ရှကေ့တငျထားတဲ့ ပို့ဈတှကေိုမကွညျ့ပဲ ဖှတယျလို့ထငျနတေဲ့ သူတှေ သိရအောငျလို့ပါ။